Nkwafu aka: A Global Multi Channel Marketing Platform | Martech Zone
Tọzdee, Disemba 19, 2013 Wednesday, December 18, 2013 Douglas Karr
Ebe saịtị ha na-ekwupụta ọkwa ha dịka Ahịa ahia Sistemụ, Ejighi m n'aka na m ga-ekwenye na nyochachara atụmatụ Slick Kick. Azụmaahịa ahịa na-agụnyekarị mgbasa ozi na-eduga na isi iji nyere aka na mmemme azụmaahịa inbound… nke Slick Kick adịghị egosi na ọ na-akwado. Ma m ga-agba akaebe na ha ike ahia otutu owa dị ka ị ga-ahụ site na ndepụta dị n'okpuru vidiyo… wow! Ihe ikpo okwu a abụrụla ọtụtụ asụsụ ma dị njikere ịga. Ọbụna ha kwupụtara akaụntụ n'efu maka ndụ maka ndị ahịa nwere n'okpuru kọntaktị 2,000 na nchekwa data ha.
Mgbe nyiwe na-ekwu maka ịbụ Onye-na-Otu, anya m na-agbachapụ… mana Slick Kick nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọ bụla na-ajụ n'ime ikpo okwu ya:
email Marketing - ozi ịre ahịa email na ọtụtụ ndebiri ebe ị nwere ike izipu, soro na jikwaa.
Faksị Mgbasa Ozi - ee, ọ ka nwere ike ịdị na mgbe ụfọdụ ọ dị mfe ịnweta nọmba faksị iji zụọ ngwa ahịa gị karịa adreesị ozi-e.
SMS Marketing - ozi ederede na-aga n'ihu ma na-arụ ọrụ ma na-arụ ọrụ nke ọma, na-enye ụfọdụ n'ime ụgwọ mgbapụta kachasị elu na onyinye nke usoro ọ bụla.
ụdị Nrụpụta enyere gị aka ịnakọta ozi achọrọ iji wuo ndepụta Opt In. Mepụta ngwa ịmepụta ụdị akwụkwọ iji kpokọta data dabere na mkpa omenala gị.
Ibe akwukwo - nyere azụmahịa gị aka itolite ma nweta ọhụụ karịa saịtị gị naanị.
Onye na -aza ajụjụ - mee ka mmekọrịta gị na ndị ahịa gị na atụmanya gị sie ike yana ịmalite mgbasa ozi ịre ahịa email gị na nnata ego.
Nnyocha ntanetị - mepụta ụdị, ntuli aka na nyocha iji nweta ọgụgụ isi jupụta atụmanya gị na ndị ahịa gị.
Olu Mgbasa Ozi - chetara ndị ahịa gị site na iji igwe na-agbasa ozi na akpaghị aka banyere ụgwọ ha ga-akwụ, nhọpụta, mmelite na ndị ọzọ
omume Management - Bochum mmemme emebeghị ka ọ dị nfe karịa na mbụ.
Njikwa kọntaktị - jikwaa kọntaktị gị niile n'otu ebe ma jikọta ya na Zoho, Salesforce ma ọ bụ Microsoft Dynamics.
Mgbasa Ozi Twitter - Gaa na-elekọta mmadụ, Gaa Global na Go Viral.
Mgbasa Ozi Facebook - Network na ndị ahịa gị na atụmanya gị.
Amaghị m ebe ndị folks nọ, mana enyere ụfọdụ bekee mebiri emebi na saịtị ahụ, enwere m ike iche na ha nọ ebe ebe Bekee bụ asụsụ nke abụọ. Ebe ọ bụ na ọ na-egosi na ha blog dị ulo oru na November 1st, 2013 - Ana m guessing na e nwere ụfọdụ ọrụ na-eme… ma ọ na-ese nnọọ ekwe.
Enwere m mmasị n'ihe ịma aka nke nyiwe ndị a na-ebute n'ihu usoro nhazi ahịa. Ọ bụ ezie na mmepe adịwanye mfe ma teknụzụ adịla ọnụ ala, nyiwe azụmaahịa agbanwebeghị ọnụahịa ha yana usoro ndị a. Ihe ọhụrụ dị ka nke a nwere ike ịnweta ntọala ma weta ọnụahịa n'ime ụlọ ọrụ ahụ niile, na-eme ka ọwa ahịa ọtụtụ ọwa dị maka azụmaahịa ọ bụla.
Tags: Ihe omimi Microsoftndị ahịankwafuZoho